COVID ကာလ မှာ သူ့အတွက် ကြက်ဥ ဝယ်ဖို့တောင် အနိုင် နိုင်ဖြစ် နေတဲ့အချိန် LIVE မှာ စိန်တွေ ကို သိန်းထောင် ချီ ဝယ်နေ တဲ့ သူတွေ ကို အံ့ သြ နေ တဲ့ သားညီ – Shwe Ba
COVID ကာလ မှာ သူ့အတွက် ကြက်ဥ ဝယ်ဖို့တောင် အနိုင် နိုင်ဖြစ် နေတဲ့အချိန် LIVE မှာ စိန်တွေ ကို သိန်းထောင် ချီ ဝယ်နေ တဲ့ သူတွေ ကို အံ့ သြ နေ တဲ့ သားညီ
Shwe Ba | October 18, 2020 | Celebrity | No Comments
ပရိသတ် ကြီးရေ သားညီ က တော့ ရုပ်ရှင် လောက မှာ ထိပ်တန်း စူပါ မင်းသားကြီးတွေရဲ့ မျိုးဆက် တစ်ဦးပါ။ သရုပ်ဆောင် အပြင် အခုချိန် မှာ ဒါရိုက်တာ တစ်ယောက် အဖြစ် ရပ် တည် နေ သူ ပါ ။ သူရိုက် ကူးတဲ့ကြော်ငြာတွေ က အစ ပရိသတ်တွေ သ ဘောကျ အားပေး ခဲ့ရ တာဖြစ် ပြီး ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားပေါင်း များစွာ ကို လည်း ရိုက် ကူးနေ သူ ပါ ။
ဒီနေ့မှာတော့ ” ကိုဗစ်ကာလ စီးပွာရေး မကောင်းဘူး သာပြောနေကြတာLive လွှင့်ရောင်းတဲ့ စိန်ဆိုင်တွေမှာဝယ်နေလိုက်ကြတာများ သိန်း ရာကျော် တန်တွေကိုပဲကြီးလှော် ဝယ်သလို ဝယ်နေကြတာဟ!!!ကိုယ်တွေများ ကြက်ဥတောင်တစ်ကဒ်ဝယ်မလား နှစ်ကဒ်တစ်ခါတည်း ဝ ယ်ရမလားတော်တော် စဉ်းစားနေရတယ် ”ဆိုတဲ့စာလေး တင်လာခဲ့တာပါ။
သားညြီေ ပာတဲ့ စကားကလည်း မှန်သလိုလို ပါပဲနော် ပရိတ်သတ်ကြီးရေ။ပရိသတ်တွေထဲမှာရော သားညီနဲ့အဖြစ်တူနေတဲ့သူတွေရှိရင်မှတ်ချ က်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလို က်ပါတယ်နော် ။
Source : Thar Nyi
ပရိသတျ ကွီးရေ သားညီ က တော့ ရုပျရှငျ လောက မှာ ထိပျတနျး စူပါ မငျးသားကွီးတှရေဲ့ မြိုးဆကျ တဈဦးပါ။ သရုပျဆောငျ အပွငျ အခုခြိနျ မှာ ဒါရိုကျတာ တဈယောကျ အဖွဈ ရပျ တညျ နေ သူ ပါ ။ သူရိုကျ ကူးတဲ့ကွျောငွာတှေ က အစ ပရိသတျတှေ သ ဘောကြ အားပေး ခဲ့ရ တာဖွဈ ပွီး ရုပျရှငျ ဇာတျကားပေါငျး မြားစှာ ကို လညျး ရိုကျ ကူးနေ သူ ပါ ။
ဒီနမှေ့ာတော့ ” ကိုဗဈကာလ စီးပှာရေး မကောငျးဘူး သာပွောနကွေတာLive လှငျ့ရောငျးတဲ့ စိနျဆိုငျတှမှောဝယျနလေိုကျကွတာမြား သိနျး ရာကြျော တနျတှကေိုပဲကွီးလှျော ဝယျသလို ဝယျနကွေတာဟ!!!ကိုယျတှမြေား ကွကျဥတောငျတဈကဒျဝယျမလား နှဈကဒျတဈခါတညျး ဝ ယျရမလားတျောတျော စဉျးစားနရေတယျ ”ဆိုတဲ့စာလေး တငျလာခဲ့တာပါ။
သားညွီေ ပာတဲ့ စကားကလညျး မှနျသလိုလို ပါပဲနျော ပရိတျသတျကွီးရေ။ပရိသတျတှထေဲမှာရော သားညီနဲ့အဖွဈတူနတေဲ့သူတှရှေိရငျမှတျခြ ကျပေးခဲ့ပါဦးနျော။ဖတျရှုပေးကွတဲ့ပရိသတျကွီးအားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလို ကျပါတယျနျော ။
မြင်သူ တကာ ငေးမော လောက် တဲ့ အမိုက် စား ခန္ဓာ ကိုယ် အလှ တွေကို ပိုင် ဆိုင် ထားတဲ့ မော်ဒယ် မျက်ဝန်း ( ကြော်ငြာရုပ်သံ )
“ဆက်ဆီမော်ဒယ် ကို စပွန်ဆာ လိုချင်လို့လုပ်တာ မဟုတ်ဘူး ညီမ မှာ စပွန်ဆာ ရှိပြီးသားပါ” ဆိုတဲ့ မရမ်ဆိုင်းနူး …
သူမ ရဲ့ တစ်ကိုယ် တော် Show လေး မှာပြသဖို့ နောက်ဆုံး ရိုက်ကူး ခဲ့တဲ့ မီးမီးခဲ ရဲ့ကြေကွဲ ဝမ်းနည်းစရာ ဗီဒီယို ဖိုင်လေး
ပုရိသ တွေ ရင်ဖို သွားစေမယ့် အိပ်ယာ ထက်က မိမိုက်လွန်းနေတဲ့ XMUE XMUE ရဲ့ ဗီဒီယို